स्यानिटाइजरको खपत अत्याधिक, स्वदेशमा बनेको कति हुन्छ विक्रि ? « Pen Nepal
स्यानिटाइजरको खपत अत्याधिक, स्वदेशमा बनेको कति हुन्छ विक्रि ?
Published On : 30 August, 2020 7:33 am By : पेननेपाल
नेपालकै उत्पादन पर्याप्त भए पनि विदेशबाट निर्बाध रूपमा स्यानिटाइजर तथा मास्क भित्रिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कमसल सामग्री सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।